Walgahiin yaadannoo guyyaa WBO fi ayyaana bara haarya 2015 magaalaa Skara Swedinitti Konyaa Ayyaantuu Dagaan qophooyte Amajjii 3, 2015 gaggeefamte. -
Tartiiba sagantaa qophii tanaa hordafuun J/Ibsaa Caffee barreessaan KHR walgahii akka banuuf D/T KHR Konyaa J/Abdalla Abdi gara waltajjiitti afeere. J/Abdallaaniis hirmaatoota walgahii baga nagayaan dhuftan jachuun simatanii walgahiin siranaan banamuu labsan.
Akka kanaan eeyba manguddoo fi faaruun alaabaa walduraa duubaan dhihaatan. J/Dugoomsaa Dhugaasaa MGS gadaa dabree, akkaataa guyyaan WBO kabajamuu eegalee fi dirree qabsootti haala akkamiini akka kabajam ture mooyxannoo qaban bal’inaan ibsan. Akksumaas bilisummaa boortaan dhaalamne deeffachuuf WBO jabeessuun qabsoo hidhannoon falmachuu malee filmaanni biro akka hin jirre seenaa mootummoota habashaa dufaa dabraa kan mirkaneessuu tahuu gadi fageenyaan dubbatan.
Proofeser Mekuria Bulchaa MKHG ABO fi MDDH walgahii tana iraatti arkamuun haala QBO tan ABO gaggeefamtu laalchisee bu’aa bahii turee fi haala yeroo ammaa hirmaatoota walghiif ibsa bal’aa kannan.
J/Mohammed Sani Abdallah D/T jaarmaya hawaasa Biiftuu QBO galman gehuuf qooda jaarmaya hawaasaa Oromoo biyya ala jiru iraa eeggamu iratti haasawa godhan. Akeeke jaarmayaan hawaasa biftuu dhaabbateef ibsuun du’aa jiruu iratti walgargaaruun joollee afan, aadaa fi amantii barsiisuu akkasumaas bifa barbaachisu hundaan QBO gageefatmtu keesatti dammaqinaafii gehinaan hirmaachuu akka tahe hubachiisan.
Hussein Ahmed miidhaa mootummaan wayyaanee Oromoo iraan gehaa jiru fi waan godhamuu qabu gabaasa Amnesty International Onkololeessa dabre baaseen walqabsiisee haasawa gabaabaa godhe WBO diingadeen jabbeeysuun barbaachisaa akka tahe J/Falmatuu Roobaa fi J/Ilillii Abrahim akkasumaas J/Ayyaantuu Galaasaa walduraa duubaan dubbatan. Gumaanni maallaqaas WBOf sagantuma kanaratti SEK 5000:00 arjoomame..
Mariif yeroo kannamtetti hirmaatoonni walgahii karaa dimokraasiii fi walba taheen yaada dhiheessanii, gaaffiileef deebiin kannamte Konyaan Ayyaantuu Dagaa ji’a Fuulbanaa keessa jaaramee umrii yeroo gabaabduu qabaatuus miseensooni isaa biyyaa keessa yeroo turanii fi biyya Swedin eegal dhufaniiis QBO tan ABO gaggeefamtu keessatti hirmaachuun walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo galmaan gahuuf amaloota farra waraaqasaa hunda irra aanuun diraqama qabsoon gaafattu hunda bahaa waan turan fi ammas ittuja jiraaniif: Umrii yeroo gabaabduu tanatti maqaa ABOn magaalaa Skara keessatti yeroo duraatiif walgahii goddoo tana qopheessuun hawaasa naannoo hirmaachisuun cichoominaa fi murannoo kaayoo ABO baballi’suuf qaban hujiin mirkaneessan. Hujiin boonsaan miseesnoota muratoo Konyaa Ayyaantuu Dagaan raawatamte tan nama jajjabeeysituu fi hamilee hawaasa magalaa tanaa fi naanno ol’kaasuun shalagamtu.
KHR Konyaa Ayyaantuu Dagaa
Tags Ayyaantuu dagaa caayaa Oromoo skaraa suwedin wal gahii
Previous Minneapolis may soon get a commemorative Oromo Street
Next Afaan Publication: Toltu Tufa Met Large Audience in Washington DC